Fitempon’ny Tontolombolongana Saodiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 16:13 GMT
Niteraka fifanoheran-kevitra marobe ny tranonkala iraisana iray vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonin'ireo Saodiàna bilaogera, ary nihetsika hatramin'ireo blaogera arabo ihany vitsivitsy ihany koa noho ny lahatsoratra iray nosoratan'ny mpiara-namorona ilay vondrom-piarahamonina voalohany ho any blaogy Saodiana. Farooha, ilay iray hafa mpiara-mamorona, nanoratra fa “tsy ho vitanareo alamina ny tontolombolongana Saodiàna. Tsy azonareo “diovina io” na “sivanina” na inona na inona koa zavatra hafa novakiako izay tadiavinareo hanaovana azy”. Nanoratra mikasika an'io ihany koa ny Egyptian Sandmonkey manao hoe:
Miampita amina lohahevitra iray hafa, nahamarika aingitraingitra iray vaovao teo amin'ireo vehivavy Saodiana blaogera i Fedo, izay manoratra mikasika ny firaisana, ary niantso azy ireo hanatsahatra ny fanaovana izany satria “maivana loatra ny fanoratana momba ny firaisana ara-nofo.” Taorian'ny famakiana ireo vaovao vitsivitsy, tsy ela akory izay, miresaka tantara ratsy momba ny firaisana ara-nofo, toa kaodikaody i hibbalicious. “Tena mba toe-javatra ratsy io, inona no asehon'io momba izay mitranga ao anatin'ny fiarahamonintsika ankehitriny?, tsy ao Kuwait fotsiny fa any amin'ireo firenena Arabo marobe, manjary miha-gaigy ara-pananahana ny olona, sady tsy ireo tokantena irery ihany fa hatramin'ireo efa manambady ihany koa,” hoy izy nanoratra. Mandritra izany fotoana izany, manao antso i Ubergirl mba hanovàna ny anarana Arabia Saodita ho Arabia Sexiste. Manana lahatsoratra mahaliana iray koa izy mikasika ny fanandevozan'ny devoly.
Raha namaly hafatra avy amin'ny blaogera iray hafa, nanoratra i Dodi mikasika ireo zon'ny vehivavy: “Misy any rehetra any ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ara-poko, manerana ny fiarahamonina misy anareo sy ny anay!” Tena voahaja fatratra ny vehivavy iray ao anatin'ny fireneko. Mandehana any amin'ireo mpisera fivahinianana fa ho hitanao hoe ianao no mandeha voalohany, any amin'ny banky na birao hafa dia ho hitanao fa ianao no raisina voalohany. Nandeha tany amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana aho ary niandry tao amina efitrano iray, dia nanatona anay ny mpiasa iray, nandray ny taratasinay, nanampy anay araka izay azony natao ary nanolotra anay SAKAFO MARAINA mihitsy koa aza!!!” Andao hiresaka ireo fanontanian'i Misso amin'izay: “Inona no nanjo ilay sarin'ny lehilahy iray mpisarisarizoro sy mahalala fomba be? Inona no nanjo ilay nofy iray hoe “niaina tamim-pahasambarana mandrakizay izy ireo”? Moa ve miara-tonga amin'ny fahendren'ny taona io fisainana mitombina io? Sa ve io fitsoahan'ireo vehivavy nahita sy nahalala tsara kokoa ary niezaka fotsiny nanao izay hampiodina an'io . Fa averina indray, tsy vitako ny tsy hieritreritra izay antony anandramana ny hampandehanana an'io raha toa io tsy mety aminao ilay izy?”
Farany, indreto lahatsoratra telo hafa mendrika ny ho avoitra: manontany i Aya hoe: Inona no mahatonga an'ireo Saodiana ho malaza?. Sorena amin'ireo blaogy Saodiàna i Dotsson, saingy nahita izy blaogera enina vaovao izay nanova ny zavatra manodidina azy, ary farany fa tsy ny kely indrindra, ndeha ho jerentsika ny fifanandrifian-javatra iray mahagaga nitarika ireo Saodiana roa blaogera hihaona.